Dabley afar qof ku dishay magaalada Mandera ee Woqooyi Bari Kenya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dabley afar qof ku dishay magaalada Mandera ee Woqooyi Bari Kenya
A warsame 16 March 2015 16 March 2015
Mareeg.com: Afar qof ayaa dhimatay, saddex kalena way dhaawacmeen, kaddib markii ay xalay rag hubeysan rasaas ku fureen dad rayid ahaa oo ku sugnaa degmada Madheera ee gobolka Waqooyi-bari Kenya.
Guddoomiye ku-xigeenka dhinac Bari ee Golaha deegaanka Mandheera, Elvis Korir ayaa oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dadka dhintay aanu ku jirin qof deggenaa degmada.
Elvis Korir ayaa xusay inuusan wax faahfaahin ah ka bixin karin qaabta uu u dhacay weerarka, balse booliska degmada uu wado baaritaanno la xiriiraka dhacdada.
Weerarka ayaa imaanaya labo maalin kaddib markii ay Al-Shabaab sheegatay mas’uuliyadda weerar lagu qaaday kolonyo gaadiid ah oo uu la socday guddoomiyaha Mandheera, Ali Roba, saddex qof ayaa weerarka lagu dilay oo labo ka tirsan ay boolis ahaayeen.
Qabrigii Sadaam Xuseen oo gebi ahaanba la burburiyey
Wasiirka Arrimaha Dibada Soomaaliya C/salaam Hadliye Cumar oo deyn badan looga yeeshay Hotel Giyaajo